सनराइज बैङ्क २३ करोड २० लाख खराब कर्जा उठाउन सफल | गृहपृष्ठ
Home लगानी सनराइज बैङ्क २३ करोड २० लाख खराब कर्जा उठाउन सफल
on: १५ माघ २०७४, सोमबार १५:५२ लगानी
सनराइज बैङ्क २३ करोड २० लाख खराब कर्जा उठाउन सफल
माघ १५, काठमाडौं (अस) । सनराइज बैङ्क लिमिटेडले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. २३ करोड २० लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल भएको छ । अघिल्लो आवमा रू. ११ करोड ३३ लाख उठाएको थियो । बैङ्कको नाफा ३ प्रतिशतले घटेर रू. ५८ करोड ७५ लाखमा सिमित भएको छ । अघिल्लो आवमा रू. ६० करोड ९७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
बैङ्कको चुक्तापूँजी ५३ प्रतिशतले बढेर रू. ८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । बैङ्कले १० बराबर ३ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरिसकेको छ । पुस ३ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैङ्कले वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. १ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको छ । दास्रो त्रैमाससम्ममा रू. ६३ अर्ब २६ करोड निक्षप सङ्कलन गरी रू. ५६ अर्ब २४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. २३ करोड ६४ लाख छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १४ दशमलव ४१ र मूल्य आम्दानी अनुपात १८ दशमलव २५ रहेको छ ।